Ngalaba ngwa nke betaine surfactants
Dị ka mmiri mmiri na-asacha mgwa, hydroxybetaine nwere ezigbo mmiri solubility na a obosara okpomọkụ nso na ezi saa mmetụta. Enwere ike itinye ya na mmiri na-asacha mmiri dị elu na mmiri dị elu. Alkylamide betaine nwere nnukwu ụfụfụ ike, obere iwe, na ụfụfụ ahụ kwụsiri ike, enwere ike iji ya na ncha na ncha mmiri nke shampoo propyl betaine. Ọ nwere obere iwe iwe na nchekwa dị elu, ma nwee mmetụta anụ ahụ dị nro.
A na-eji Betaine eme ihe dị ka emulsifier na emulsions ịchọ mma. Ihe ngwọta ya kwụsiri ike, nwee mgbasa dị mma mgbe etinyere ya na anụ ahụ, nwere mmetụta nlekọta anụ ahụ dị mma, ma nwee ezigbo nje bactericidal ma baa ọgaranya na-edozi ahụ.
A na-eji ihe ndị na-eme ka mmiri na-emepụta Betaine eme ihe na shampoos na anionic na ndị na-abụghị ionic surfactants n'ihi ụfụfụ dị mma ha, ikpochapụ ha, nchekwa, na iguzogide mmiri siri ike. Belata mgbakasị na mmetụta ndị ọzọ.
Ahịa, ndị na-ebi akwụkwọ na ndị na-agba agba
Mmepe nke betaine amphoteric surfactants sitere na ngwa na ụlọ ọrụ textile. Betaine amphoteric surfactant bụ otu n’ime ihe kachasị arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ na-ejide njirimara amphoteric na nkwụsi ike kemịkal n'ọtụtụ pH. Ya mere, betaine amphoteric surfactant kwesịrị ekwesị dị ka a leveling gị n'ụlọnga, Mee ka a wetting gị n'ụlọnga, scrubbing gị n'ụlọnga, antistatic na softening gị n'ụlọnga na sọlfọ nke ajị.
Betaine amphoteric surfactants nwere ike iji mee ihe dị ka microemulsifiers na dispersants. Mgbe betaine amphoteric surfactants na-eji styrene emulsion polymerization, obere ahụ na warara nkesa (50-100μm) enwere ike nweta. A na-eji Alkyl betaine amphoteric surfactants eme ihe emulsifiers maka styrene polymerization. Mgbe latex na mmiri na jupụtara n'ime a ogbe nke slime silk, acrylic ma ọ bụ naịlọn kapeeti, ọ nwere ike belata stains; dodecyl na tetradecyl beets Alkali nwekwara ike-eji dị ka a suspending gị n'ụlọnga maka okenye polymerization nke vinyl chloride; a na-emepụta ọtụtụ allyl latexes na ọnụnọ nke obere lauryl betaine ma ọ bụ coco-betaine; alkyl betaine eji dị ka emulsifier maka cationic latex, Na cationic emulsifier, pụrụ iche eji ụzọ paving Chemicals, ya ịrụ ọrụ bụ nnọọ ike karịa ndị na-abụghị ionic emulsifier; betaine amphoteric surfactant nwekwara ike-eji na nkwadebe nke foto emulsion, stearyl betaine bụ nkwadebe na The emulsifier nke monomer alkyl acrylate na acrylonitrile na gelatin-dakọtara polymerized hydrosol. Sol na-ejigide nkwụsi ike n'ọtụtụ pH ma jiri ya dị ka emulsion foto.
Ihe mgbakwunye mmanu mmanu
Betaine amphoteric surfactants na-eji na nke abụọ mmanụ mgbake na tertiary mmanụ mgbake, na ha dispersibility bụ karịsịa bara uru ka na nzu nzu formations; Mwepụ nke microemulsions nwere betaine ma ọ bụ acyl betaine amphoteric surfactants nwere ike melite mgbake mmanụ ọnụego; Alkyl betaine amphoteric surfactants na-ewepụ ore carbonate. N'ihi na betaine amphoteric surfactants nwere ezigbo solubility na saline solution, a gaghị ebute ha site na ion calcium divalent; C12 ~ 14 alkyl Chain sulfite betaine bụ ọgwụ na-egbu egbu maka nje bacteria na-ebelata sulfate, nke enwere ike iji mee ihe maka mmelite mmanụ na mmelite mmanụ.
Ahụ ike na ahụike
Betaine amphoteric surfactants nwere ike iji mee ihe na ọgwụ, ọgwụ, bayoloji na mpaghara ndị ọzọ metụtara ya. Alkyl betaine nwere mmetụta ụfọdụ na amant acid enantiomeric na mkpụrụ ndụ ọgwụ ọjọọ kwekọrọ na ya; betaine amphoteric surfactant nwere ike ji mee ihe dị ka transdermal adsorption ome osooso maka ionic mmiri-soluble ọgwụ; betaine amphoteric surfactant nwere ike Ime ka mmụba nke ihe ndị na-arụ ọrụ na mmanu ndị na-ete mmanụ nwere neomycin sulfate na chloramphenicol; Sultaine kwesịrị ekwesị maka ikewapụ na ịsachapụ antigens site na sistemu usoro ndụ, enwere ike iji ya dị ka ọgwụ mgbochi reagent na reagent diagnostic; emere site na Sultaine Virus particles nwere ikike siri ike igbochi mmeghari nje na ngụgụ nke ụmụ oke nwere ọgwụ mgbochi; a na-eji mmiri ọgwụ nke cetyl sultaine egbu oge ịnweta mineral nke anụ ahụ a na-atụgharị, dị ka akwara obi pericardium anụ ahụ, nke a ga-edozi tupu edozi. Ejiri ya n'ime ihe ngwọta nke sulfobetaine amphoteric surfactant; ihe ngwọta mmiri nke alkyl betaine amphoteric surfactant na-abụghị ionic surfactant kwesịrị ekwesị maka ịgwọ ọkụ na ọbara ọbara na fụrụ akpụ usoro ọgwụgwọ anụ ahụ; alkyl betaine amphoteric surfactant Ndị na-ahụ maka ọgwụ na-arụkwa ọrụ nke ọma n'ịgwọ ọnya afọ. Mgbe ejiri ya na ọgwụ salicylate, ha nwere ike belata ma ọ bụ gbochie ọnya afọ na-akpata nrụgide ma ọ bụ na-ebute salicylate; ihe ngwọta nke octyl sulfobetaine Mgbe ọ na-ekewapụ mitochondria, ọ nwere ike igbochi ọnwụ nke mitochondrial carnitine. Mgbe nchikota nke sulfobetaine rutere ọtụtụ oge mkpa achọrọ maka mgbochi transferase, ọ nwere ike igbochi carnitine acetyltransferase na carnitine palmitate transferase.
Alkyl betaine amphoteric surfactant bụ ezigbo onye na-emecha akpụkpọ anụ, nke nwere ike ime ka akpụkpọ anụ na-eguzogide ọgwụ na nhicha akọrọ; na-agbakwunye betaine amphoteric surfactant na alkenyl roba nwere ike igbochi blooming nke sọlfọ nwere vulcanizing gị n'ụlọnga; stearin Acyl betaine bụ ezigbo onye na-achụsasị, nke nwere ike melite arụmọrụ nke mmiri mmiri slurry pelletizing na mwepụ ájá; betaine amphoteric surfactants eji na mkpuchi nwere ezigbo mmiri adhesion na ntu oyi na-eguzogide; Ngwongwo ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe, karịsịa usoro ndị nwere Aluminium nwere ike ịgwakọta ya na agba mmiri na-eguzogide mmiri iji zere ihe ize ndụ nke mgbawa, ma mee ka mkpuchi ahụ nwee ọdịdị dị mma nke dị mma, elu dị mma, ezigbo adhesion na mmiri; sulfobetaine amphoteric surfactant Eji ya mee ihe magnetik na-edekọ ihe, mgbe a na-ete lubricants methylsilyl na betaine amphoteric surfactants, ụkọ nke obere diski ozi dị elu ekpughere na oke okpomọkụ na oke iru mmiri na-ebelata; nwere sulfobetaine amphoteric The resin nke surfactant nwere ike uniformly gbasasịa magnetik ntụ ntụ na àjà ihe ọ -ụ -ụ-ezi ahụ, si otú ime ka magnetization; a na-eji lauryl amidopropyl betaine eme ihe dị ka otu n’ime ihe ndị mejupụtara acidic aqueous solution iji kpochaa eriri iko. Fadrịba ama pụtara; na-agbakwunye betaine amphoteric surfactants na fatịlaịza nwere ike ịgbatị adị adị nke mmiri mmiri fatịlaịza site na 15 ruo 27 izu. A na-enweta nke a site na igbu oge na nhazi nke magnesium nwere precipitates ma dabara adaba maka mmiri-usoro phosphoric acid ammoniation Production; Betaine amphoteric surfactant nwekwara ike iji electroplate ọla kọpa, tin, zinc na ọla ndị ọzọ iji nweta alloys na-enwu gbaa.